जेठ ३१ गते सोमबार , कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल ? – My Blog
जेठ ३१ गते सोमबार , कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल ?
No Comments on जेठ ३१ गते सोमबार , कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल ?
तपाईको दिन मानसिक निराशाले भरिपूर्ण रहनेछ। भावनाको प्रवाहमा केहि अधिक बहनु हुनेछ। बोलि र व्यवहारमा ध्यान राख्नुहोला। आमाको स्वास्थ्यको विषयमा अधिक ध्यान राख्नुहुनेछ।
तन र मनबाट हल्कापन अनुभव गर्नुहुनेछ। तपाईको उत्साह वृद्धि हुनेछ। मन संवेदनशीलताले भरिपूर्ण रहनेछ। तपाईको कल्पनाशक्ति वृद्धि हुनुको कारण काल्पनिक दुनिया रहनेछ। पारिवारिक विषयमा रुचि लिनुहुनेछ।
मिथुन- का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह (Gemini)
कार्य सम्पन्न हुन ढिलाई हुन् सक्छ। तपाईको कार्य निर्धारित रुपमा सम्पन्न होला। आर्थिक आयोजनमा प्रारम्भमा केहि बाधा उत्पन्न हुनेछ। पेसा तथा व्यावसायिक स्थलमा सहकर्मचारीसँग वातावरण अनुकुल छ। मित्र र शुभेच्छकसँग भेट होला।
मित्र वा आफन्तसँग दिन उल्लासमय वातावरणमा बिताउनुहुनेछ। छोटो यात्रा हुन सक्ला। सुरुचिपूर्ण भोजनको स्वाद लिन सक्नुहुन्छ। तपाई निकै भावनाशील रहनुहुन्छ। आर्थिक लाभ हुने दिन छ।
अधिक भावुकताको कारण मनमा निराशा रहला। स्त्रीवर्गबाट सम्हालेर रहनुहोला। बहस वा छलफल विवादबाट जोगिनु होला। अदालतको मामिलामा सावधानी अपनाउनुहोस्। बोलि र व्यवहारमा ध्यान राख्नुहोला। अधिक खर्च होला।
तपाईको दिन आनन्द-उल्लासमा बित्नेछ। विविध क्षेत्रमा लाभ मिल्नेछ। यसमा स्त्री मित्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहनेछ। मित्रसँग सुन्दर, मनोहर स्थलको आयोजन गर्न सक्नुहुन्छ। सन्तानबाट शुभ समाचार मिल्नेछ।
तपाईको लागि शुभ दिन छ। पेसा वा व्यावसायिक क्षेत्रमा अनुकूल वातावरण रहला। उच्च अधिकारीसँग महत्वपूर्ण चर्चा गर्नुहुनेछ। पदोन्नति होला। पारिवारिक जीवनमा प्रफुल्लित वातावरण रहनेछ। सरकारी कार्यमा सफलता मिल्नेछ।
पेसा वा व्यावसायिक स्थलमा सम्हालेर काम गर्नुहोला। उच्च अधिकारीको नकारात्मक व्यवहारको कारण कष्ट हुन सक्छ। शारीरिक रुपले थकान महसुस गर्नुहुनेछ। सन्तानसँग मतभेद खडा होला। महत्वपूर्ण निर्णय नलिनुहोला। खर्च हुन सक्ला।
कुनै पनि नयाँ काम प्रारम्भ नगर्नुहोला। बिरामीको उपचार सकेसम्म सुरु नगर्नुहोला। बोलि र व्यवहारमा ध्यान राख्नुहोला। अधिक संवेदनशीलताले मन निराश बनाउनेछ। स्वास्थ्य प्रति सावधान रहनुहोला। अनैतिक सम्बन्ध र निषेधात्मक कार्यबाट टाढा नै रहनुहोला।
तपाईको दिन शुभ छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा व्यापार विकसित हुन सक्ला। दलाली, आयोग, ब्याज आदिबाट आय वृद्धि हुनेछ। यसले तपाईको आर्थिक स्तर बलियो बन्नेछ। तपाईको मान-प्रतिष्ठा वृद्धि हुन सक्छ। छोटो यात्राको योग छ।
तपाईको दिन आनन्ददायी रहला। तपाईको कार्य सफलता तथा प्रसिद्दि प्राप्त होला। परिवारसँग राम्रो तरिकाले दिन बिताउनुहुनेछ। पेसा र व्यावसायिक क्षेत्रमा सहकर्मीको सहयोग मिल्नेछ। घरमा आनन्दपूर्ण वातावरण रहनेछ। शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ रहला।
तपाईको सिर्जनशक्तिमा अधिक निखार आउनेछ। कल्पनाशक्तिको कारण आफ्नो साहित्यलाई विश्वभर चिनाउनु हुनेछ। विधार्थीको लागि अनुकुल दिन छ। स्वभावमा भावुकता विशेष मात्रामा रहनेछ।
← १८ बर्षकि नर्स छोरीलाई सकेको हो भन्दै बुबा आए मिडियामा ,४ जन केटाहरले बोकेर लगेछन, कसरि भिज्यो बिस्तार ? (भिडियो) → यी हुन् अन्तरिक्षमा स्याटेलाइट पठाउने टोलीमा नेपाली चेली सरु श्रेष्ठ
दया हुनेले फोटोमा छोएर रिप लेखिदिनुहोला
मन्थलीमा जिप खस्यो, चालक सहित ३ जनाको मृत्यु
खाना पकाउने सिलिन्डर चुहावटका कारण जलेका खनाल परिवारको उपचारमा आर्थिक अभाव…..
कञ्चनपुरमा २५ वर्षीय सशस्त्र प्रहरी जवान मृत फेला?मनमा अलिकति दयामाया छ भने फोटो छोएर RIP 😭 लेख्नुहोस
नायक प्रसान्त तामाङ्गको आमाको असमाहिक नि’धन,लेखे यस्ताे रवाउने स्टाटस !